10 Faa’ido oo Laga Helo Biyo Badan oo La Cabo | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor — August 7, 2018
Biyaha oo lacabo waxay leeyhiin faa’idooyin badan waxaan halkan kusoo gudbinaynaa 10 faa’ido oo muhiim ah kuwaaas oo laga helo biyo badan oo la cabo.
1. Biyo badan oo la cabo waxay faa’ido u leedahay jirdhiska iyo jimicsiga. Daraasad lagu sameeyay ragga iyo dumarka jimicsiga ciyaara waxaa lagu ogaaday kuwa caba 2 koob oo biya ah ka hor jimicsiga inta ay bilaabin ay helaan nashaad iyo jir ka wanaagsan kuwa biyaha yar caba.
Ciyaartoyda biyaha cabta waxay ka helaan dheefshiid wanaagsan iyo amateedka cuntada oo u furma iyo jir siman.
2. Biyaha caadiga ah oo aad loo cabo waxay jirka ka saaraan baruurta iyo xeerta jirka ku keedsanta.
3. Biyaha oo la cabo waxay keenaan adkeysi badan waxaan lagu talinayaa in biyaha aad loo cabo lana cuno cuntooyin isku dheeli tiran waayo biyaha kaliya marka ay ku dhacaan caloosha oo maran waxay keeni karaan lalabo ama yalaalugo badso biyaha hana moogaan in wax cunto.
4. Biyaha yara kulul marka la cabo waxay jirka ka saaraan sunta. Waxay kaloo hoos u dhigaan baruurta oo jirka ku badato.
5. Biyaha qabow jirka ayaa u baahan mararka qaar waa marka uu jirku soo waajaho kuleel daran iyo marka ay jirto isbedelka cimilada kuleelka saa’idka ah.
6. Biyaha oo la cabo waxay jirka ka saaran sunta gasha jira haku gasho raashiin inay u raacdo ama hawo ahaanba.
7. Biyo cabida waxay shaafisaa 2-da kiliyadadood, waayo biyo ku filan haddii ay helaan kelyaha waxaa saafi noqda oo nadiifsama dhexdooda shaqadooduna waxay noqotaa mid wanaagsan.
8. Biyo cabida waxay bur-buriyaan walxaha adage ee gala kelyaha dhex fadhiista sidda quruuraxa iyo macaadinta isku dhex-aruursata kelyaha.
9. Biyaha waxay caawiyaan wax badan u taraan jirka shaqadiisa iyo maqaarka kore ee oogada aadanaha waxay jirka ka saaraan laalaabmida.
Marka aad biyo badan cabto jirkaaga waxa uu helayaa maqaar nadiif ah iyo muuqaal da’a yaraan ah iyo if gaar ah.
10. Biyaha oo aad laasimto waxay jirka siiyaan nolol gaar ah iyo inay nooleeyaha unugyada jirka helaan kuwii dhintayna biyaha ayaa nadiifiyo.
Biyaha oo la cabo waxay wax u taraan finanka ka soo baxa jirka sidda kuwa kasoo baxa dhalinyarada ee loo yaqaan findoob ama finqooqa.
Qubarada waxay sheegayaan in biyaha ay yihiin daawo ay dadka wada fahansaneen waxayna daaweeyaan cuduro badan sidda sokorta kolostaroolka, dhiig karka, sumowga jirka, maqaarka, unugyada jirka, calool xiranka iyo kuwa kaloo badan.
Biyo cabida waxay daaweysaa afka oo soo ura af urka waxa uu calaamad u yahay jirka oo biyo cabida ku yartahay waxaana keena bakteeriyo ku dhex dhalata afka.
Qofka isku arka afka oo soo ura waa innuu biyo badan cabaa sidda ay quburo kutaliyeen, waayo biyaha ayaa la fal galaaya xubnhaa jirka, saarayana wixii wasakh ah iyo bakteeriyo ah afkana waa bilowga dheef shiidka.
Qubarada waxay ku talinayaan in la cabo biyo badan waliba in la cuno khudaarta leh biyaha badan ee jirka wax u tara.
Sidda ay ina fartay aayadan Alle oo ka mid quraanka Alle waxa weeye
( Miyaynan ogeen kuwa Alle ku gaaloobay in wax waliba uu Alle ka buuray biyo kuna nooleeyo biyo oo miyaynan iyagu rumeyneen Alle.)
Waxaa lagula talinayaa dadka oo dhan inay biyaha si wanaagsan u cabaan waalidiintana waxaa lagula talinayaa inay caruurytooda siiyaan biyo ku filan waayo caruurta oo biyo la siiyo waxay ka caawisa:
1. Koriinka ilmaha yar
2. Murqaha iyo jirka ilmaha yar oo koraaya waxay u baahan yihiin biyo ku filan
3. Biyo oo la siiyo caruurta waxay ka caawisaa inay helaan calooshooda oo yeelata socosho wanaagsan saxarada kuma dhagto.
4. Ilmaha biya caba waxa uu helaa nashaad badan iyo firfircooni gooni ah.
Tags: 10 Faa’ido oo Laga Helo Biyo Badan oo La Cabo
Next post Buugga Maxaa Burburiyay Soomaaliya? Maxaase Xalnoqon Kara?
Previous post Waa Maxay ANC?